Usoro ịtọgbọ Tile - Divenland
STLỌ ỌR D DIAGRAM
Ceramic taịl nile na ọtụtụ-eji dị ka a ọtọ ji achọ ihe onwunwe, ọ na-abịa dị iche iche shapes na nha, unit arọ na njupụta. odi iche, na otu esi tapuchie ihe a ihe diri ama. Ihe nnochi nke talenti tales nwere ufodu nwere mmetuta na ntukwasi obi nke oru a na aru oru, ihe ndi ozo nke cellulose ethers nwere ike hu na udiri ihe eji eme tale dicha nelu ulo di iche.
Enwere ike mezuo ihe achọrọ nke ihe mgbochi taịlị site na mgbakwunye nke ngwaahịa cellulose ether. Enwere ike ịdị comed ngwa ngwa na ebe a na-egweri ngwa ngwa; ezigbo njigide mmiri na-ebelata oke mmiri na ngwa agha nke mkpụrụ na taịlị na-etinye, ma na-ebelata mmiri mmiri na ngwa ngwa nke ihe na-adọrọ adọrọ na taịl. ejidere ya n'ime ihe nragide ahụ dị ka o kwere mee, si otú a na-ekwe ka mkpuchi ngwa agha ahụ dịrị ogologo oge, yana oge mmeghe ka ogologo. Viscosity ziri ezi na-eme ka ngwa agha ghasie ike ma kwalite ịdị n'otu nke ngwa agha ahụ na taịlị na mkpụrụ. Ikike icho iji meziwanye nnuku nke ulo a, karisia maka uzo di elu; pụrụ iche gbanwetụrụ cellulose ethers nwere ike hụ na iwu nke tile Ọ gaghị amị amị, ọkachasị maka taịl nile na marble. Thehọrọ nri etolite cellulose ziri ezi na-enye ohere ka taịlikan ahụ nweta ike nkekọ dị elu, na-enye mmeghari okpomoku dị elu na oke ikuku. N'okwu a, ọ na-enyekwa ihe mgbochi tile ogologo oge zuru oke ma na-agbanwe agbanwe.
Dika ọrụ di nkpa na oru ihe eji eme taịli, jikọtara ọnụ abụghị naanị na-eme ka mmụkọ taịlị jikọtara ọnụ ma ọ bụ mmetụta dị iche. Ọrụ dị mkpa, kamakwa iji meziwanye nkwụsị nke mgbidi ahụ. Ọgaghị ọgaranya na otu agba bụ isi ihe achọrọ maka ọtụtụ ngwaahịa ijikọ ngwaahịa, nke kwesịkwara ịnwe nkụda mmụọ, obere porosity, ọrụ dị mfe yana ike mmalite. Njirimara. Cellulose ethers bụ ndị kacha adabara admixtures maka ndị a Njirimara.
O nwere ike ime ka njikota nke ngwa agha ahụ na adhesion na ihe mgbakwasị ụkwụ na-enweghị sagging, ọ nwekwara ikike ijigide mmiri na obere mwepu, nke nwere ike ịmịchaa ngwa agha ahụ ma zere ịgbawa.